Umbane ohamba ngenqwelomoya ohamba ngenqwelomoya oshukumayo wenza umvelisi kunye nomzi mveliso ngokuthe ngqo | Uthandile
5kw idizili genset
5kw Welding Generator Cwangcisa
Vula uhlobo lwesakhelo
Uhlobo Cwaka lweCanopy
Umvelisi wegesi yendalo
Iintsimbi Generator Icwangcisa
Ulwandle Desalination Genset
Hlanganisa ukupholisa, ukufudumeza kunye neNkqubo yamandla
Ilungelo elilodwa lomenzi lenkampani
Ukuhanjiswa kwenqaba yokukhanyisa idizili esetiwe
UMZEKELO EP-LT5SE / 4 EP-LT10SE / 7 EP-LT10SE / 9
Ubuninzi bolwandiso lwemasti m 4.5 7.2 9
Ukuphakama Umbane Ngokwam Umbane
Ukujika ikona Isidanga 340 180 340
Uxinzelelo lokusebenza IPsi (Ubukhulu) 28 N / A 35
Ukuma kweNtloko umthwalo kg (Ubukhulu) 40 60 80
amandla ewonke izibane w 4x400 4x400 / 4x1000 4x1000
Umthamo wokukhanya I-Lumen / isibane 36000 36000-85000 85000
Rhoqo Hz 50/60
Ixesha lesibane Iiyure 5000
Lobushushu Working ℃ 85
Isalathiso sokukhusela uxhulumaniso IP54
Ukukhanya kokukhanya Iihektare 5to7
Ukukhanyisa iNqaba yeDielse Generator Set yitreyila, ilifti yokunyusa, ukuhambisa umbane, izixhobo zokukhanyisa, umxube wenkqubo, inqwelwana eyahlulayo inokusebenzisa umzimba wesithuthi xa utsaliwe, ikwanakho ukusebenzisa zonke izinto ezikhoyo kunye nazo zonke iintlobo zeveni eguqulweyo enezixhobo zokuphakamisa imasti kunye nokulayita kunye nezinye izixhobo ufakelo olufanelekileyo inqwelo erhuqwayo, kwaye ube iseti epheleleyo inkqubo yokukhanyisa eziphathekayo. Iindawo zokukhanya ezihambayo zingahanjiswa ngokulula ukuya kwiindawo apho kunokuvulwa khona izithuthi kwaye ukukhanya okukhulu kuyadingeka okwethutyana. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Uthotho lwe-EP-LT yokukhanyisa kwinqaba yinqaba yokukhanyisa ephathekayo ephathekayo 4x400W okanye I-4 * 1000W izibane zesinyithi zesinyithi kunye nokususa Umvelisi wedizili ongenangxolo 5KW / 10kw. Ilungele indawo yokusebenza encinci naphakathi, i-EP-LT yokukhanyisa inqaba kulula kakhulu ukuba iphathwe ngumqhubi omnye.
Sebenzisa ngokulula: Ngamaqhosha ahlukeneyo e-smart ukulawula ukucima / ukucima kwezibane zibini kwaye kufanelekile ukulungelelanisa ukuphakama kwemasti ngesandla; isibane sineenxalenye ezimbini eziphambili: isiphatho sesibane (kubandakanya ipaneli yesibane kunye nemasti) kunye nendawo yokuma (kubandakanya umvelisi, ityala lombane kunye nesiseko sejeneretha). Kukulungele ukuhlangana, ukuhlafuna kunye nokuhambisa. Sebenzisa ngokulula kwaye ngokusebenza ngokugqwesileyo.
Ukupakisha ngokwahlukileyo: Icandelo ngalinye lenqaba yokukhanyisa lipakishwe kakuhle ukunqanda nawuphi na umonakalo onokubakho.
Sebenzisa uyilo lothutho oluninzi, ukusebenza ngokukuko ngokuchaseneyo kwaye unokusebenzisa ngokuthembekileyo kwimeko yokuphazamiseka okwenzeka rhoqo;
Sebenzisa izinto ezingumxube wokukhanya kwendalo kunye nobuchwepheshe bokutshiza obuphezulu, ukungangeni manzi, ukungabi nothuli, i-antirust kwaye kufanelekile ukusebenza kwindawo yangaphandle ixesha elide;
Ukuhambelana ngokugqibeleleyo kombane kwaye akunakubangela uphazamiseko kuthungelwano lokuhambisa;
Isibane sonke sisebenzisa izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni zentsimbi, ezikumgangatho ophezulu kwaye zithembekile kwaye zisebenza kakuhle kwimeko enzima.
Inkonzo eyenzelwe ngokwezifiso: Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezizodwa zabathengi abahlukeneyo, singathanda ukumisela uhlobo lwesibane olwahlukileyo, amandla, ubungakanani besibane, ukuphakama kwemasti kunye nomvelisi ngokwendlela esifuna ngayo abathengi bethu.
Ubungakanani besicelo: indawo enkulu, ukukhanya okuphezulu, ukukhanya okukhethekileyo kunye nezixhobo zokuhamba zinokusasazwa ngokukhawuleza, ukubonelela ngoncedo lwentlekele ebusuku, imeko kaxakeka, ukukhanyisa indawo yokwakha kunye namandla kaxakeka
Egqithileyo I-5kw evulekileyo / ethe cwaka yomoya opholileyo wedizili esetiweyo
Okulandelayo: Impompo yamanzi eChina
Inkampani yethu wawongwa High National ...
"Inzululwazi ibalulekile ekuqhubeni izinto zangaphakathi kuphuhliso, igama elithi" ishishini elitsha neliphezulu kwitekhnoloji "libhekisa kumalungelo ezinto ezizimeleyo ezizimeleyo zeshishini ezenziwa ngophando oluqhubekayo kunye nophuhliso kunye nokuguqulwa kwezinto ...
Umnxeba:0086- (0) 591-83431596
Umhlaba 3, iPaki yezeMizi-mveliso, iHuanxi Town, iSithili saseJin'an, iFuzhou, iFujian, China